Jaamac: Waxaa laga yaabaa in dad xoolo waday oo harraad iyo gaajo u dhintay ay jidadka yaallaan
Photo | Ceelbuh: Dad xoolo ay la soo hamaayeen ka dejinaya gaari/Muxyadiin Axmed Rooble/Ergo
Radio Ergo 12 May, 2017 SANAAG
(ERGO) - Jaamac Maxamuud oo ka mid ah reer guuraaga u soo naq-raacay deegaanka Ceelbuh ee gobolka Sanaag ayaa sheegay in laga yaabo reer miyiga xoolaha la hayaamaya in ay u dhintaan harraadka iyo gaajada oo meydkooda lagu arko waddooyinka. Tifaftiraha Raadiyo Ergo, Muxyadiin Axmed Rooble ayaa ninkan kula kulmay deegaankaas xilli uu gaari ka dejiyay xoolo uu kala soo noqday degmada Isku-shuban ee gobolka Bari oo uu aaday markii uu roobka ka da’ay dhamaadkii sanadkii hore.
Jaamac: Hadda waxaan ka soo guuray Isku-shuban, xoolo ari ayaan geeyay oo gaaraya ilaa afar tiro iyo afartan ah (440) annaga oo ilaa saddex guri oo isku qoys ah. Arigii afarta tiro aheyd qeyb waa soo lugeysiiyay qeyb tiro ahna waan soo qaaday oo 50 baa jooga meel nagu dhow oo qarbaxaas ah, kontonkii kale waa bakhtiyay oo 5 neef oo ka mid ah ayaa gaariga ku dhex bakhtiyay, intii kale maqaadiir ayaa heshay, waan waraabinnay dabadeedna lugcad ayuuba noqday, cudur inuu laayay ayaan u qaatay iyo dhiig la’aan iyo harraad.
Harraadka sida laguu sheegay, dadkii aanu u tagnay annaga meel dhexe ayaanu joognay oo xaggaa shishe ma tagin. Dadkii aanu u tagnay biyihii uu heystay iyo hadduu baad heystay mid walba waa lala soo laastay, markii la soo laabtay, annaga oo yaabban oo cirka la eegayo ayuu Ilaahay roob ku shubay, nin soo lugeeya iyo nin geeddi ku soo guuray ninba wuxuu haabtaba waa la soo jeestay. Aniga arigii aan u hooyay gurugii uu u hoyan jiray – Qeybi wali aaggaan ma joogto, karkaar ayay joogaan saacaddaan aanu joogno oo xaggaan ayay ku soo jeedaan haddey soo gaari karaan. Ari labo tiro ah oo saddexdii reer leeyihiin ayaan gaari soo saarnay, marka hadda goobta gaariga lagu furay ayuu joogaa ariga.
Ergo: Ariga maxaad gaari u soo wada saari weyseen?
Jaamac: Kharashbaa loo waayay, kharashkiibaa yaraaday, dadkuna dee wadne-caddaad ayuu ahaa oo waa markii shanaad oo aan ariga gaari ku qaaday. $1,400 ayuu ku tagay xeradaan ka soo qaaday safarkii hore, dhibtu markaa sida laguu sheegay – Ilaaheybaa horta wax bixiya - waxa weeyaan marka dhibtaasaa jirta xoolaha. Waxaa looga yaabban yahay sidaan horayba idinkugu sheegay in dad meyd ah oo harraad iyo gaajo u dhintay oo xoolo waday ay jidadka yaal yaallaan. Marka haddaan Ilaahay cid u sakhirin halis baa ku jirta halkaa. Waana laga helayaa waa khasab. Ninka dameerbuu wataa markii uu dameerkii rarto - ciidanba ha ahaadee – labo caagadood iyo labo jiirikaan buu qaadaa, biyaha uu sitaa waxaa weeye shan liitar qaad iyo labaatan iyo labaatan, kontonkaa liitar buu sitaa, kontankii liitar dee toddobo casho ma cabbirin karto weeyaan. Dhulka waa oomane, hadhimtu ka jirtaa maanta, kolley dadka intiisa badanne waa taa.
Ergo: Imisa ayaa loo socdaa halkii aad u guurteen iyo halkan?
Jaamac: Toddobo cisho iyo ka badan ayaa la soo soconayaa, arigii Jimcihii ka soo guuray oo gurigeyga ka yimid wali laamiga ma soo gaarin, waa sagaal casho. Marka howshaas ayaa jirta, abaarta Ilaahay un baan ka hoos galeynaa. Marka howshaas ka maamul ahaan ka hay’ad ahaan iyo wixii Islaam sheegtaba waxaa loo baahan yahay - sidii odayaashaba idiin sheegeen – war bal doonyo ha joogo, duunyada Ilaahay baa badbaadiyee dadkiibaa halis ku jira, waxaana ugu sii dhibaato badan maanta, kan soo lugeeyay, kan soo lugeeyay, xaggaa dambe dib ugu noqon mayo o biyo kumaba jiraan, sida odayaashu idiin sheegeen biyo halkaa jiro oo la dhihi karo dib ha u doonto ma jiraan, halkan dhexe waa abaar iyo lama galaay. Gaarigaas waxa uu soo socday marka uu waliba meelaha soke ka yimaado, aniga waxaa uu ila soo socday 24 saac. 24 meesha uu gaariga ka soo socday hadde waa la maleyn karaa, marka dhulka howlahaasaa ka jira waana ka siman tahay, dee waxaanu leenahay dadkaa hala badbaadiyo.
Ergo: Qoysaskii makula socdaan mise kaligaa ayaad safarradaan soo gashay?
Jaamac: War xaasas maanan heyn, shan biloodba ma arag Sanaag baan ku xereeyay, Ceerigaabo ayay joogaan. Afar reer baanu nahay - afartii aan xoolaha wadnay - afartuba Ceerigaabo ayay joogaan, maku iri saddex reer baanu nahay, saddexdaa qoys, aniga iyo walaalkey labo qoys baanu kala ahayn labaduba Ceerigaabo bey ku xereysan yihiin oo dee wey suurtagali weysay in mar la qabadsiiyo, reer kale isna waa nagu saddex, reer kale afartaa reerba Ceerigaabey joogaan magaaladey ku jiraan.
Ergo: Maka war qabtaan reerihii iyo xaaladahooda muddadaa bisha ah?
Jaamac: Waanu kala war helnaa oo teleefan ayaan ku xiriirnaa aragti haka yaabin, kolley meel cidlaa kagama imaan meel uun baan kaga nimid, balse – ninka inuu gurigiisa ka xisaabtamo ayaa wanaagsan.